Sawirro: Shirkada Somtel oo toddobaadkii lixaad abaal-marisay 1,000 macaamiil - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Shirkada Somtel oo toddobaadkii lixaad abaal-marisay 1,000 macaamiil
Sawirro: Shirkada Somtel oo toddobaadkii lixaad abaal-marisay 1,000 macaamiil
Muqdisho (Caasimada Online) – Macaamiisha la abaalmariyay ayaa kala joogo guud ahaan Gobolada dalka iyo Degmooyin ay ka mid yihiin Waaberi, Kaaraan, Dharkeynleey, Yaaq-shiid, Hodan, Jowhar, Guri-ceel walan-weyn I.w.m.
Todobaadka 6aad waxaa lagu guuleystay hadiyado ay ka mid-yihiin, laptops, Gasaalado, Firinjeero, TV screens, Ipads, Dahab iyo Hadiyado Dhowr ah.
Munaasabada Macaamiisha lagu abaalmarinayay Todobaadkii Lixaad ayaa waxaa goob-joog ka ahaa Mas’uuliyiin ka tirsan XFS iyo Golaha Shacabka Soomaaliya oo uu horkacayay Mudane: Daahir Cabdi C/laahi wasiir Ku Xigeenka Wasaarada Batroolka XFS.
“Waxaan Ju faraxsanahay inan maanti xaadir u noqdo Munaasabad lagu abaalmarinayo Macaamiisha Somtel iyadoo si daah-furan ay u dhacday Macaamiisha Si toos ah Hadiyadahooda loo gudoonsiiyay Hambalyo Somtel.”
Waxaa Sidoo KalecMunaasabada aka Hadley agaasimaha arimaha bulshada xafiiska lRa’isul wasaaraha XFS Marwo: Maryan Adan Amiin oo u rajeysay Gobolada jubooyinka iyo Qof dumar ah inay guuleysato ilaah Mahadii.
“Waxaan u rajeynayaa inuu guuleysto Macamill joogo Deegaanada jubiland Waliba dumar ah ilaah madii waxa ay noqotay sida aan filaayay gabadhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay tartankan ka qeyb-qaata Oo ku guuleeysta gawaarida, Dahabka iyodhamaan hadiyadaha qaaliga ah.”
Waxaa Sidoo Kale Munaasabada ka Hadley Xildhibaanada Saciid Xeyd iyo Faatix Siciid Xasan oo si wadajir ah u bogaadiyay Somtel iyo Macaamiisha la abaalmariyay Yodobaadkan iyagoo Todobaadka soo Socda Macaamiil Cusub sidaan oo kale loo abaalmiyo si ay bulshada oo idil uga faa’ideystaan hadiyadahaan qiimaha badan.
Waxaa Sidoo kale Deeq Waxbarasho ku guuleystay Mrs Faaiso Cosoboow Oo ku nool Degmada waberi ee Gobalka banaadir.
“Waan Ku faraxsanahay in Somtel Deq Waxbarasho I gudoonsiiso Xaqiiqdii baahi farabadan ayaan u qabay Mana Filey in somtel ay igudoonsiineyso Somtel waxa ay dabooshay baahida qoyskeyga waxan uga faa’ideynayaa gabadheyda Alle haka ajar-siiyo shirkadda Dadweynaha Somtel Somalia.”
Mr Salaries Adan Cusmaan ku guuleystay 10g oo Dahab ah isagoo aad ugu mahad-celiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel.
“Waxaan ku faraxsanahay in Somtel I abaalmariso anigoo aan ku shubasho fara-badan aan sameyn Waa nasiib xaqiiqdii waan sii labalaabi doonaa siticmaalkeyga adeegyada Somtel.”
Ugu dambeyntii C/fitaax Aaloos Oo ku guuleystay Mobile Samsung ah ayey shirkaddu gudoonsiisay Mobile-kaan casriga ah.
“Waxaan Ku fikirayay inan iibsado Mobile Cusub lacagteyda wey ii baaqatay waxaan rajeynayaa inan baahiyaha kale aan qabo uga faa’ideysto Lacagta aan horay ugu talagalay inan Mobile ku iibsado.”
Hadiyadaha ay shirkaddu Yodobaadka 4aad Macaamiisha ku abaalmarisay Waxaa qeyb ka ah Gasaalad, Fridge, eDahab Cash, Ipads iyo Hadiyadoo kale qaali ah.
Hadiyadaha Gaariga Hyndai iyo Gaadiidka bajaajka ay Somtel bixisay Todobaadyadii hore ayaa waxa’ ay shaqo abuur U noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo Qoysaska Danyarta Kuwaasoo u baahan grab iyo hiilo uga timaada ganacsatada soomaaliyeed.
Shirkadda somtel Waa Shirkadii ganacsi ugu horeysay ee 10, 000 Hadiyadood dib ugu celisay Macaamiisheeda sharafta leh Todobaad kasta maalinta Jimcaha ayey shirkaddu si toos ah u abaalmarisaa Guuleystayaasha Todobaadkaas.
Todobaadka Soo Socdo Maalinta Jimcaha 28/08/2021 ayaa lagu wadaa in somtel ku abaalmariso gaari Hyundai qiimihiisu yahay ku dhawaad 40, 000 doolar Waxaan leenahay nasiib wacan Marwo: Madino Xuseen Yaxye oo Ka mid ah Macaamiisha somtel ee Magaalada beledweyne ee Xarunta Gobalka hiiraan.